रक्तदान : कसले गर्न हुने, कसले नहुने? -::DainikPatra
रक्तदान : कसले गर्न हुने, कसले नहुने?
‘रक्तदान जीवनदान। रक्तदान महादान।’
यी ‘स्लोगन’ हामीले बारम्बार सुन्ने गरेका छौँ। रक्तदानका लागि प्रेरित गर्न यी वाक्यांशले धेरै भूमिका पनि खेलेका होलान्। तर, रक्तदान गर्नुअघि केही कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।
रगतको प्रमुख काम प्राणवायु तथा पोषक तत्व कोषिकाहरुमा पुर्‍याउनु हो। रगतमा विभिन्न प्रकारका तत्व हुन्छन्, जसले ज्युँदो राख्न र रोगहरु निको पार्न मद्दत गर्छन्। रक्तदान गर्नाले कतिपय मानिसको ज्यान बचाउन सकिन्छ। एक पटक रक्त दान गरेर त हेर्नोस१ कसैको ज्यान जोगाउँदा जुन गर्व महसुस हुन्छ, त्यसलाई शब्दले वर्णन गर्न सकिँदैन। रगत आँफैलाई वा आफन्तलाई कुनै पनि बेला चाहिन सक्छ। रक्तदान गर्दा अरुलाई मात्र होइन आफैँलाई पनि फाइदा पुग्छ।
७० केजी वजन भएका व्यक्तिले लगभग पाँच सय मिलिलिटर रक्तदान गर्न मिल्ने भए पनि नेपालमा तीन सय ५० मिलिलिटर मात्रै रगत निकाल्ने गरिन्छ। हाम्रो शरीरमा औसत पाँच लिटर रगत हुन्छ। तर, नेपालीको वजन कम हुने हुँदा रगतको मात्रा पनि कम हुन्छ। शरीरको वजन अनुसार प्रतिकेजी ७० मिलिलिटरका दरले रगतको मात्रा पत्ता लगाउन सकिन्छ। एउटा स्वस्थ रक्तदाताले प्रत्येक ५६ दिनमा रक्तदान गर्न मिल्छ। तथापि प्रत्येक तीन महिनामा रक्तदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। दान गरिएको रगत ४२ दिनसम्म काम लाग्ने भएकाले रगत आवश्यक पर्ने धेरै बिरामीलाई यो काम आउँछ।
रगतलाई सामान्यतया आठ समूहमा विभाजन गरिएको हुन्छ। ‘ए, बी, एबी, ओ’ पोजिटिभ र ‘ए, बी, एबी, ओ’ नेगेटिभ। आपतकालीन अवस्थामा ‘ओ’ नेगेटिभ समूहको रगत अन्य समूहको रगत भएकालाई दिन सकिन्छ। त्यसैले ‘ओ’ नेगेटिभ समूहलाई ‘युनिभर्सल डोनर’ भनिन्छ। ‘एबी’ रक्त समूह भएकाहरुले भने अन्य रक्त समूह भएकाको रगत लिन मिल्छ। त्यसैले ‘एबी’ समूहलाई ‘युनिभर्सल रेसिपिएन्ट’ भनिन्छ। सैद्धान्तिक रुपमा यसो भनिए पनि रक्त समूह मिलाएरै मात्र रगत लिनु उत्तम हुन्छ।
रक्तदान गर्ने व्यक्ति स्वस्थ हुनु जरुरी छ, ताकि रगत लिनेलाई कुनै प्रकारको रोग नलागोस्। दान गरिने रगतमा जीवाणु, परजीवी, औषधि तथा कुनै पनि प्रकारका हानिकारक पदार्थ हुनु हुँदैन। रक्तदान गर्नुअगाडि रक्तदाताको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भए पनि हाम्रो सन्दर्भमा प्रायः परीक्षण विस्तारमा गरिएको हुँदैन।
नेपालमा सामान्यतया रगत सुरक्षित छ कि छैन भनी थाहा पाउन निम्न परीक्षण गरिन्छ।
१. हेपाटाइटिस ‘बी’ र ‘सी’
२. एचआइभी १ र २
४. रक्त समूह।
– १८ वर्ष उमेर तथा ५० केजी तौ भएका स्वस्थ्य व्यक्ति जोसुकैले रक्तदान गर्न सक्छन्। अभिभावकको स्वीकृतिमा १६ वर्ष माथिकाले पनि रक्तदान गर्न मिल्छ। ६० वर्षभन्दा बढी उमेरकाहरुले रक्तदान नगरेको वेश।
– ज्वरो वा सास फेर्न गाह्रो नभएमा एलर्जी, सुक्खा खोकी भए पनि रक्तदान गर्न मिल्छ।
– सामान्य खालको दम भएकाहरुले औषधि खाइरहेका भए पनि रक्तदान गर्न सक्छन्।
– नाडीको चाल ५०-१०० प्रतिमिनेट भएका, माथिल्लो प्रेसर (सिस्टोलिक) १००-१८० तथा तल्लो प्रेसर (डायास्टोलिक) ५०-१०० छ भने उच्च रक्तचापको औषधि खाइरहेका वा नखाएका जोसुकैले पनि रक्तदान गर्न सक्छन्।
– चिनी रोगले आँखा, मुटु, मिर्गौला आदि अंगमा असार नपारेको अवस्थामा मुखबाट औषधि खाइरहेकाहरुको चिनी रोग नियन्त्रणमा छ भने रक्तदान गर्न सकिन्छ।
– विगत ६ महिनादेखि छाती दुख्ने तथा मुटुरोग सम्बन्धी लक्षण नभएका, रोग नियन्त्रणमा भएका र दैनिक क्रियाकलापमा समस्या नभएका मुटुरोगीहरुले रक्तदान गर्न मिल्छ।
– ज्वरो आएको तथा एन्टिबायोटिक लिइरहेको अवस्था।
– आइसोट्रेटिनोइन, एकुटेन, फिनास्टेराइडजस्ता डन्डिफोर तथा पिसाबको ग्रन्थी बढेको अवस्थामा प्रयोग गरिने औषधिको अन्तिम मात्रा खाएपछि एक महिना नपुगेको अवस्था।
– पिसाबको ग्रन्थी बढेको अवस्थामा प्रयोग गरिने डुटास्टेराइड औषधिको अन्तिम मात्रा खाएपछि ६ महिना नपुगेको अवस्था।
– एस्पिरिन खाइरहेकाहरुले पर्खनुपर्छ भन्ने छैन, तर तीन दिन पर्खंदा वेश।
– हेपारिन, वार्फारिनजस्ता रगत पातलो पार्ने औषधि लिइरहेका बिरामीहरुले चिकित्सकद्वारा औषधि छुटाइएको अवस्थामा सात दिनपछि मात्र रक्तदान गर्नु पर्छ।
– टिक्लोडिपिन, क्लोपिडोग्रेल जस्ता रगत जमाउन कम गर्ने औषधि लिइरहेकाहरुले औषधि छोडेपछि १४ दिन पर्खनुपर्छ।
– ग्रोथ हर्मोन लिएकाहरुले रक्तदान गर्नु हुँदैन।
– सोरियासिस नामक छालाको रोगका लागि इट्रेटिनेट औषधि लिइरहेकाहरुले कहिल्यै पनि रक्तदान गर्नु हुँदैन। एसिट्रेटिन औषधि लिइरहेकाहरुले पनि औषधि छोडेको तीन वर्षसम्म रक्तदान गर्नु हुँदैन।
– छालाको क्यान्सरमा प्रयोग गरिने भिस्मोडेगिल औषधि लिइरहेकाहरुले औषधि छोडेको ७ महिना नपुगेको अवस्था।
– प्रतिरक्षात्मक शक्ति कमजोर हुने रोगमा प्रयोग गरिने टेरिफ्लुनोमाइड औषधि लिइरहेकाहरुले औषधि छोडेको २ वर्षसम्म रक्तदान गर्न मिल्दैन।
– दादुरा, हाडे, रुबेला, ठेउला तथा जनै खटिरा विरुद्ध खोप लगाएको चार हप्तासम्म रक्तदान गर्नु हुँदैन।
– हेपाटाइटिस ‘बी’ का रोगीको सम्पर्कमा नआएका तर हेपाटाइटिस ‘बी’ खोप लगाएकाहरुले तीन हप्तासम्म रक्तदान गर्नु हुँदैन।
– हेपाटाइटिस ‘बी’ का रोगीको सम्पर्रकमा आएका, हेपाटाइटिस ‘बी’ इम्युन ग्लोबुलिन लगाएकाहरुले एक वर्ष नपुगेसम्म रक्तदान गर्नु हुँदैन।
– प्रति एक सय मिलिलिटर रगतमा हेमोग्लोबिन महिलामा १२ दशमलब ५ ग्राम तथा पुरुषमा १३ ग्रामभन्दा कम वा २० ग्रामभन्दा बढी भएकाहरुले रक्तदान गर्नु हुँदैन।
– गर्भवती महिलाले बच्चा जन्मेको ६ हप्तासम्म रक्तदान गर्नु हुँदैन।
– हृदयघात, मस्तिष्कघात, कलेजो तथा मिर्गौला फेल भएकाहरुले रक्तदान गर्नु हुँदैन।
– तराई क्षेत्रमा व्यावहारिक नहुन सक्छ, तथापि मलेरियाको उपचार गरेको तीन वर्षसम्म तथा मलेरिया हुने क्षेत्रमा भ्रमण गरेको एक वर्षसम्म रक्तदान गर्नु हुँदैन।
– रगत बग्न सजिलै नरोकिने रोगी वा रगत पातलो पार्ने औषधी खाइरहेकाहरुले रक्तदान गर्नु हुँदैन।
– हेमोक्रोमेटोसिस नामक रोग भएकाहरुले रक्तदान गर्नु हुँदैन।
– रक्तनलीबाट लागूपदार्थ सेवन गर्नेहरुले रक्तदान गर्नु हुँदैन।
– रगत तथा ग्रन्थीको क्यान्सर भएकाहरुले रक्तदान गर्नु हुँदैन। पूर्णरुपमा उपचार गरिएका क्यान्सर रोगीहरुले पनि एक वर्षपछि मात्र रक्तदान गर्न सक्छन्।
– ५-२० मिनेट आराम गर्नुपर्छ।
– कहिलेकाहीँ रक्तदान गरेपछि रिङ्गटा लाग्न सक्छ, होस गुम्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा जुरुक्क उठ्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। कोल्टे फर्केर आराम गर्नुपर्छ। गोडा अलि माथि उठाउने वा गोडामुनि सिरानी राखेर सुत्नुपर्छ।
– जुस, जीवन जल, पानी जस्ता तरल पदार्थ प्रसस्त पिउनुपर्छ।
– २४ घण्टा शारीरिक श्रम हुनेगरी गाह्रो काम गर्नु हुँदैन।
रोग हजारौँ प्रकारका हुन्छन्। सबै रोगको परीक्षण सम्भव नहुन सक्छ। आफूलाई लागेको रोग तथा स्वास्थ्य समस्याबारे अरुलाई भन्दा आफूलाई बढी थाहा हुन्छ। यसैले रक्तदान गर्नुअघि आफ्नो रोग तथा स्वास्थ्यबारे स्वास्थ्यकर्मीलाई सबै कुरा जानकारी गराउनुपर्छ। आफ्नो स्वास्थ्यमा नराम्रो असर नपर्ने गरी रक्तदान गरौँ तर रोगदान नगरौँ।
डा. नारायणसिंह गुरुङ, प्राध्यापक, गण्डकी मेडिकल कलेज